YPG Series Pressure mwaya Dryer - China Changzhou Daming Pharmaceutical Equipment
Description The mvura kana namatidza mbishi zvinhu zviri sprayed kupinda Mini zvokunwa madonhwe kubudikidza chakatsindirwa atomizer iyo anokwevera rubatsiro kubva kumanikidzwa kana diaphragm pombi, uye nokukurumidza vachiyanikira kuburikidza nekupisa exchange. (10-90 chik) pakupedzisira, madota kana chiduku granule zvapera. Features 1. Kuomesa nokukurumidza iri kutsanya uye akakodzera kuti kupwa chafariz utetsa zvinhu zvikuru. 2. The rakapedzwa chigadzirwa ndiyo bhora granule pamwe dzakafanana saizi. fluidity dzayo solubility zvakanaka. The wakachena chigadzirwa zvakakwirira yayo quá ...
The mbishi zvinhu mvura kana namatidza iri sprayed kupinda Mini zvokunwa madonhwe kubudikidza chakatsindirwa atomizer iyo anokwevera rubatsiro kubva kumanikidzwa kana diaphragm pombi, uye nokukurumidza vachiyanikira kuburikidza nekupisa exchange. (10-90 chik) pakupedzisira, madota kana chiduku granule zvapera.
1. Kuomesa nokukurumidza iri kutsanya uye akakodzera kuti kupwa chafariz utetsa zvinhu zvikuru.
2. The rakapedzwa chigadzirwa ndiyo bhora granule pamwe dzakafanana saizi. fluidity dzayo solubility zvakanaka. The wakachena chigadzirwa zvakakwirira uye unhu zvayo zvakanaka.
3. ndikarangarira zvezvinotaurwa rakafara. Maererano hunhu mbishi zvinhu, anogona kushandisa mhepo inopisa kuti aiyanika uye vanogona kushandisa inotonhorera mhepo kuti granulate. It ane anochinjika rakasimba mbishi zvokuvakisa.
4. oparesheni Its rakanaka uye kugadzikana; ayo kuzvidzora kuri nyore uye yakakodzera, nyore kuziva otomatiki oparesheni.
Uwandu Ipwa mvura
makirogiramu / h
Kunopindirana kukura (O * H)
Tembiricha kuti Inlet mhepo
Raw zvinhu muunganidzwa
Kana tembiricha iri kuvatumwa 200 ℃, kuti parameters anofanira dzaona maererano hunobatsira ezvinhu.
Electric + chiutsi
Hot mhepo nevira
1 Huwandu Ipwa mvura kwakabatana hunhu yakatsvuka zvokunyama uye kudziya kwemvura. The parameters patafura rinowanikwa sezvo 150-160 ℃
2 Customer aigona kusarudza zvakasiyana nokuomesa nzira dzakadai: ano hwemvura, countercurrent hwemvura uye upfu achidzoka nokuomesa kusangana nezvaidiwa chigadzirwa.
3 The kuerera chati gadzira rinongova zvechipameso, mutengi aigona sarudza subassembly maererano vanoshayiwa.
Hazvina kushanda muna foodstuff, mishonga, zvemakemikari Mazinga, dyestuff, Ceramics, nemakemikari, epurasitiki maindasitiri uye zvichingodaro.
Previous: XSG Series Rotating Flash Dryer
Next: YZG, FZG Series Vacuum Dryer
Centrifugal mwaya Dryer
High-Speed ​​Centrifuging And Spraying drier kuvat
Industrial mwaya drier kuvat
Industry Kuomesa Machine For Chemical mwaya Dryer
Lab mwaya Dryer
Mukaka mwaya Kuomesa Machine
Pressure Spraying drier kuvat
mwaya drier kuvat
mwaya Dryer Machine
Mwaya Kuomesa Machine
Mwaya Type Dryer
Zpg mwaya Dryer For Sticky Material
XF Series Horizontal Zara Bed Dryer
KJG Series booka Nereza Dryer
Choto Dryer DZAKATEVEDZANA PLG chamazuva ndiro Dryer